मेरुदण्ड दुख्ने रोगको प्राकृतिक उपचारबारे डा. संजोग कुमार क्षेत्रीको ५ टिप्स – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ माघ १० गते बिहीबार १५:५४ मा प्रकाशित
मेरुदण्ड (गर्दन, ढाड, कम्मर) दुख्ने समस्या आम नेपालीको साझा समस्या हो । यसबाट विद्यार्थी, गृहिणी तथा कर्मचारी बढी पीडित भएको पाइन्छ । यसको उपचार तथा हेरचाह कसरी गर्ने ? प्राकृतिक रुपमै यसको उपचार गर्न सम्भव छ त ? चित्रवन नेचर क्योर हस्पीटल चितवनका डा. संजोग कुमार क्षेत्रीका अनुसार यसको प्राकृतिक उपचार सम्भव छ । यसबारे उनले ५ टिप्स सुझाएका छन् ।
हाम्रो समाजमा रोग लाग्नेबित्तिकै उपचार गराउने प्रवृत्ति छैन । सामान्य त हो, दुई–चार दिनमा ठिक भइहाल्ला नि भन्ने आम मानसिकता छ । मेरुदण्ड दुख्ने बिरामीको हकमा पनि यस्तै हो ।
सामान्य ढाड दुख्यो भने सुरुमा बिरामी डाक्टर कहाँ जान मान्दैनन् । अलिकति ढाड दुखेको त हो । दुई–चार दिनपछि आफै ठीक भइहाल्ला नि भन्ने बिरामीको मानसिकता हुन्छ । ठूलो समस्या न निम्तिएसम्म ऊ उपचार गर्न जाँदैन । उपचारमा गरिने हेलचेक्र्याइले नसा च्यापिने समस्या देखिन सक्छ ।
समस्या जति सानो भयो त्यति त्यसलाई बुझ्न र समाधान गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले यदि ढाड दुख्न सुरु हुनेबित्तिकै सम्बन्धित विशेषज्ञकहाँ गएर चेकजाँच गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।